Home Wararka Waalidiinta caruurtii Farmaajo u diray dalka Eritereeya oo banaanbax dhigay
Waalidiinta caruurtii Farmaajo u diray dalka Eritereeya oo banaanbax dhigay
Waxa amanita Magaalada Muqdisho gaar ahaan Taalada Daljirka daahsoon ee Degmada Boondheere ka dhacay banaanbax ay dhigeen Waalidiin badan oo wiilal ay dhaleen uga maqan yihiin dalka Eretariya. Waalidiinta oo isugu jiray Hooyooyin iyo Aabayaal ayaa waxaa ay sheegeen in wiilashadii ay dhaleen ay in muddo ah tababar ugu maqan yihiin Eretariya, kuwaasi oo dowladda Federaalka Soomaaliya qaaday, si loo askareeyo.
Waalidiinta oo ay ka muuqatay muurgo iyo walwal ayaa sheegay qaar kamida iyaga aysan Carruurtooda aysan in muddo maqal hadalkooda, isla markaana ay la’yihiin, iyagoona ugu baaqay Madaxda dowladda inay dib u celiyaan wiilashooda loo qaaday tababarka. Sidoo kale Waalidiinta ayaa sigaar ah Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uga dalbaday inuu hor yimaado, uuna ka qanciyo cabashada ay qabaan ee la xiriirta Carruurta ka maqan.
Muqdisho ayaa waxaa horey uga baxay banaanbax ay waalidiintan ku dalbanayaan in Carruurtooda dib loogu celiyo oo haatan ku maqan tababar ay dowladda Federaalka ugu qaaday dalka Eretariya, waxaana qaar kamid ah waalidiinta ay horey u sheegeen in Carruurtooda ay ku geeriyoodeen dagaalo ka dhacay Itoobiya.